“को’रोनाको औषधी अक्टोबर सम्म आउन सक्छ, असम्भव छैन”: डा. फाउची
September 4, 2020 by साहारा संदेश
विश्वभर कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या २ करोड ६४ लाख नाघिसकेको छ। संक्रमणबाट हालसम्म ८ लाख ७३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने १ करोड ८६ लाख ६१ हजारभन्दा बढी संक्रमणमुक्त भएका छन्। अझै ६ करोड ९१ लाखभन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको उपचार चलिरहेको छ।
कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रण बाहिर रहिरहँदा संक्रमणबाट प्रभावित मुलुकहरु यस विरुद्धको भ्याक्सिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। कतिपय देशले भ्याक्सिन बनाएर परीक्षण गरिरहेका पनि छन्। यसैबीच, अमेरिकाका वरिष्ठ कोरोना विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन आगामी अक्टोबरसम्ममा आउने सम्भावना निकै कम
रहेको बताएका छन्। तर, त्यो असम्भव भने नरहेको पनि उनको भनाइ छ। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका ‘कोरोनाभाइरस टास्क फोर्स’ का सदस्य समेत रहेका डा. फाउचीले सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भने, “मलाई लाग्छ, धेरैजसो मानिसहरु नोभेम्बर-डिसेम्बरसम्ममा भ्याक्सिन आउने ठान्छन्।”
कोरोनाबाट पिल्सिरहेको विश्वले भ्याक्सिन कहिले पाउला त ? यो प्रश्नमा डा. फाउचीले अक्टोबरसम्ममा भ्याक्सिन आउने आकलन भइरहेको तर आफूलाई त्यस्तो नलागेको बताए।
Prevविबाह पछि श्रीमतीको यस्तो प्रस्तावले श्रीमानको होस् उड्यो: पूरै पढ्नुहोला
Nextएलिजा गौतमको रवि लामिछाने प्रति आक्रोश : रविले ऋषिमुनि भनेपछि भयो तनाव